Ny WHO dia mila fanomezana vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-1 miisa 19 miliara
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny WHO dia mila fanomezana vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-1 miisa 19 miliara
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fahazoana vaksiny haingana izay rehetra mora tohina vokatr'io virus io, anisan'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana, ireo antitra ary ireo izay mararin'ny aretina mafy.
Ny fandehanan'ny fizarana vaksinin'ny COVID-19 avy any amin'ny firenena manakarena be dia be miadana.
Ireo firenena manankarena dia nanentana ny hanome vaksinina vaksiny COVID-1 farafahakeliny.
Hatreto dia firenena 92 ​​no nahazo vaksiny 89 tapitrisa.
Ellen Johnson Sirleaf, filohan'ny Liberia teo aloha, ary Helen Clark, praiminisitra taloha tany Nouvelle Zélande, dia naneho ny ahiahiny lalina noho ny fihenan'ny fizarana vaksinina avy amin'ny firenena be fidiram-bola ka hatrany amin'ny firenena ambany.
Ireo mpitarika roa teo aloha dia filohan'ny mpiara-miasa amin'ny Panel mahaleo tena momba ny fanomanana sy ny valiny (IPPPR), natombok'i World Health Organization (OMS) tamin'ny Jolay 2020. Navoaka tamin'ny Mey ny tatitra farany.
"Ny tatitry ny Independent Panel dia nanoro hevitra fa ny firenena manana fidiram-bola avo lenta dia manome toky fa farafahakeliny fatrany vaksinina omena azy ireo no zaraina indray amin'ireo firenena ambany sy manana fidiram-bola miisa 92 amin'ny 1 septambra, ary fatra iray tapitrisa lavitrisa amin'ny tapaky ny taona 2022", hoy izy ireo nanambara.
"Ny fiantohana fa ireo rehetra eran'izao tontolo izao mora tratry ny tsimok'aretina, ao anatin'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana, ireo antitra ary ireo izay mararin'ny aretina mafy, dia azo vaksiny haingana dia dingana iray lehibe hanakanana ny areti-mandringana."
Hatramin'izao, ny hetsika firaisan-kina eran-tany COVAX dia nandefa dosie fanomezana 99 tapitrisa, hoy izy ireo. Raha firenena 92 ​​no nahazo vaksiny 89 tapitrisa teo ho eo, ity dia kely lavitra ny iray miliara nantsoina tamin'ilay tatitra.
“Ny firenena be vola dia nandidy fatra mihoatra ny avo roa heny noho izay ilaina amin'ny isam-poniny. Fotoana izao hanehoana firaisankina amin'ireo izay mbola tsy afaka nanao vaksiny ireo mpiasan'ny fahasalamany voalohany sy ireo vahoaka marefo indrindra ", hoy ireo mpitarika teo aloha.